aminawehelie – Page 7 – Aminawehelie.me
By aminawehelie on June 22, 2016 • ( Leave a comment )
W/Q: Amina Muuse Weheliye Qof walba adduunka halkii eebbe u garto ayuu kaga noolaanayaa, kol eey tahay cirifka waqooyi, dhulweynaha carabta, amase Hawai iyo salka dhulka cusbooleyda ah ee shiinaha. Dunida waxaa ku nool dad halgan ugu jira sidii ay ku heli lahaayeen nidaam ay codkooda ku […]
Everybody has a choice when it comes he/she’s life, but there is too much to think about when it comes your own choices, you should think hard and long to choose who you want to be, which way you want to live and who you want to […]
By aminawehelie on June 29, 2015 • ( Leave a comment )
Tan iyo sakayto ilaa hadda oo ay tahay fiid hore taleefoonkiisa ayeey waceysay, weey ku daashay hadana ma quusan, kolba howl yar ayeey guriga ka dhex qabataa, waa wacdaa, kolba shah beey soo shubataa waa wacdaa, iyaduna kama caajisto isaguna kama qabto. Laakiin wax badan oo hore ayeey […]
By aminawehelie on December 7, 2014 • ( Leave a comment )
Soomaalida iyo qabyaaladda: a href=”https://aminawehelie.files.wordpress.com/2014/12/img_1948.jpg”&gt; Sanadkii 1994tii ayaa iyadoo la joogo March, 8-deeda waxaa koox wariyayaal ah loo diray in eey ka soo waramaan warbixinnana ka so diyaariyaan xus kooban oo malinta haweenka adduunka loo dhigayey. Xuska waa iska gaabnaa waayoo xilligaas waxaa dalka qeybo badan oo ka […]
Sheeko Gaaban: Q: 1aad Tan iyo sakayto ilaa hadda oo ay tahay fiid hore taleefoonkiisa ayeey waceysay, weey ku daashay hadana ma quusan, kolba howl yar ayeey guriga ka dhex qabataa, waa wacdaa, kolba shah beey soo shubataa waa wacdaa, iyaduna kama caajisto isaguna kama qabto. Laakiin wax […]
By aminawehelie on June 27, 2014 • ( Leave a comment )
W/Q: Amina Muuse Weheliye Muranka waan jecelnahay, xasilooniduna waa inna dhibtaa, qof kastaba wuxuu dood ka keeni karaa waxa ugu yar, xitaa salaanta cadi ah , waxaad moodaa in aanu kuligeen Diinta muqadaska ah ee suuban ee ilaahey innagu galladay kaga egnahay waardiye (Ilaaliye) budh weyn sita, balse […]
By aminawehelie on June 25, 2014 • ( 1 Comment )
Waxaa qortay: Amina Muuse Weheliye Cadoow. Koonkan anuu ku nool nahay ilaahey ayaa taagay, dhulka u fidiyey, samadana dushaas ku taakeeyey, biyahana badaha iyo webiyadana goobo cayimman kula ballamay. Isla eebbahaas ayaa dadkana Adan aabbe uga dhigay, xaawa oo uu feer aadan tiisa ah ka abuurayna hooyo. Isla […]
By aminawehelie on May 29, 2014 • ( Leave a comment )
Aflagaado laguugula kaco ma ahan oo qur ah tan sida tooska ah laguu yiraahdo, laakiin waa noocyo badan tahay. Cayda, af-xumada iyo aflagaadada waxaa dhici karta in aanu u naqaan oo qur ah, tan laguula qasdo oo laguugu yiraah: WAXAAS, WAXAAS IYO WAXAAS BAAD TAHAY, […]
By aminawehelie on May 28, 2014 • ( Leave a comment )
(SHEEKO GAABAN) W/Q: Amina Muuse Weheliye Wuxuu ku hambaaraarugay taleefoonkiisii gacanta oo dhacaya, inta qaarkiisa kore kor u hilmiyey, indhaha marmartay ayuu si hal-haleel leh gacantiisa midig u hoos haabiyey, barkintii uu ku jiifay oo uu iminka ka toosay. Teleefoonku weli waa dhacayaa, laakiin weli ma anuu […]
By aminawehelie on March 20, 2014 • ( Leave a comment )
Originally posted on Maydhane:
Qormada Aamina Muuse Weheliye ee magaceedu yahay Meherkayga i sii waa qumbulad ku dhex qaraxday bulshada Soomaaliyeed wakhti ku haboon. Halkan anigu dib ugu celin maayo wixii Aamina sheegtay, laakiin waxaan jecelahay inaan ballaadhiyo soohdinta ay ka hadashay. Ballaadhintaasi waxaan u arkaa inay lama huraan…
78,188 Waxaa aqrisatay